Guardiola oo u jawaab celiyay Gary Neville, kadib hadal uu dhawaan ku weeraray kooxda Manchester City – Gool FM
Guardiola oo u jawaab celiyay Gary Neville, kadib hadal uu dhawaan ku weeraray kooxda Manchester City
(Manchester) 04 Nof 2018. Macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa wuxuu beeniyay in kooxdiisa ay tahay waxa uu Gary Neville ugu yeeray ee ah “Farshaxan madow ah” isaga oo sheegay inuusan ku tiirsanaanin farsamada noocan ah tan iyo bilowgii xirfadiisa ciyaareed ee shaqada tababarka.
Gary Neville ayaa ku tilmaamay Manchester City maado farshaxan ee mugdi ah, taasoo macnaheedu yahay in ciyaartoyda Guardiola ay qalad ku galaan kooxaha kasoo horjeeda si ay kaga hor hortagaan kubadaha weerarka ah.
Pep Guardiola ayaa arintan si weyn kaga soo hor jeestay, isagoo sheegay inuusan raacin qaabkan, inkastoo uu qirtay in mararka qaar ay dhaco.
Laakiin Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisa ay ku tiirsan tahay istiraatiijiyada ku saleysan kubad heysasho iyo qaab ciyaareed ku saleysan weerar, isla markaana aysan sameynin wax qalad ah.
“Ma aqbalayo arrintan, waxaanahay koox isku dayeysa inay ciyaarto, dabcan marka ay jirto weerar celin, mararka qaarkood waxaa jira isku dhac, laakiin koox ahaan kuma fikireyno in ay sidaas dhacdo”.
“Mararka qaar way dhacdaa, ma dhahayo inaanan sameynin xad-gudubyo, laakiin muhiimada ayaa ah in aanan sidaas u sameynin si xad gudub ee ku talagal ah, markaad kubbada haysato 7 daqiiqo 10 daqiiqo, waxaa suuragal ah in qaladaadka ay yaraadaan, sidaas darteed waxaan u maleenayaa inaanan ahayn koox sameysa qaladaad badan kulamada aan ciyaareeno”.
Sarri oo Jabiyay Rikoodh Sanado badan u yiilay Premier League